Canada - Isi okwu Choke: Otu esi gbochie ọgba aghara na akụ na ụba Canada na gafere - KWESELRAY AYBỌCH.
Canada - Isi okwu Choke: Otu esi egbochi ndị mmadụ ezigara ndị Canada akụ na ụba na ihe karịrị
Switzerland: marmụ nwanyị ga-aga Switzerland na gburugburu ụwa n'agbanyeghị…
Belgium: Coronavirus na Belgium: ikpe 169 mara na Belgium
India: Iltija Mufti kwuru na gọọmentị na-atụ ụmụ nwanyị ụjọ…
Kevin Piper ka na-arụ ọrụ na ọdụ ụgbọ mmiri na Port of Halifax, mana ka ụbọchị ọ bụla na-agafe, ọrụ na-ebelata.
N’izu a, otu n’ime ndị ahịa nnukwu ọdụ ụgbọ mmiri, New Jersey-nke sitere n'oké osimiri Atlanta Atlantic (ACL), malitere ibugharị ụgbọ mmiri ya na ọdụ ụgbọ mmiri dị na United States mgbe ụgbọ okporo ụzọ gbochiri ọtụtụ akụkụ nke Ebe Ọwụwa Anyanwụ Canada, na-eme ka ibu dị ọnụ ahịa na docks na Nova Scotia.
Andrew Abbott, onye isi oche ACL kwuru, "Ọ bụ ihe ịtụnanya nye m. “Anyị na-eresị ndị ahịa ahịa eziokwu na ọ dị mfe (ịfe ụgbọ mmiri) na Canada.”
Ndị na-eme ngagharị na-egbochi ụzọ ụgbọ okporo ígwè Halifax na Halifax, Nova Scotia na Feb. 11.
Laura Cutmore / site na Reuters
Na mbido ọnwa a, ihe bidoro dịka ngagharị iwe atụmatụ TC Energy Corp. iji wuo pipeline ya nke Coastal GasLink site na mpaghara ọdịnala Wet'suwet'en First Nation na ime obodo British Columbia kwụsịrị nsogbu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na akụnụba na-aga n'ihu. bibie obodo ahụ tere aka ruo Halifax.
Esemokwu dị n'etiti ndị uwe ojii Royal Canadian Mounted na ndị na-eme ngagharị iwe na Wet'suwet'en gbara ndị ọzọ ume ịhazi mgbochi ndị ọzọ, gụnyere nke malitere na Feb. 6 na ebe dị oke mkpa choke na laini Canadian National Railway na Tyendinaga Mohawk Territory, ihe dịka narị kilomita 200 n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke Toronto. Ihe mgbochi nwere ike dobe ebe ahụ iji belata okporo ụzọ na-akwụ ụgwọ n'okirikiri ihe niile dị na Eastern Canada, ma, n'aka nke ya, na-egbochi ọrụ ụfọdụ n'ọdụ ụgbọ mmiri ya.
Ihe mgbochi a na-ewelite ajụjụ ọhụụ gbasara otu obere ndị ngagharị iwe n'otu akụkụ dịpụrụ adịpụ nke Western Canada si nwee ike ịmebi akụnụba obodo.
Akwụsịla okporo ụzọ ụgbọ oloko na Canada tupu oge eruo, gụnyere opekata mpe ugboro abụọ n'afọ gara aga n'ihi mbibi ọ bụla na February 2019 na ọrụ CN na-arụ ọrụ na Nọvemba. Mana nsogbu dị ugbu a na-abanye na izu nke atọ ya, na-agabiga ihe omume ndị mere na mbụ, enwerekwa ihe ịrịba ama ole na ole na-egosi na mkpebi dị nso n'akụkụ.
N'ihi nke a, mgbochi ahụ na-ewelite ajụjụ ọhụrụ banyere otu obere ndị ngagharị iwe na mpaghara dịpụrụ adịpụ nke Western Canada si nwee ike imebi akụnụba obodo, ma gosipụta nchegbu banyere adịghị ike nke akụrụngwa obodo na aha ya n'ụwa. dịka onye ọrụ mmekọrịta akụ na ụba a pụrụ ịdabere na ya ọbụlagodi na mgbaghara akụ na ụba dị mkpụmkpụ.
Ihe mgbochi dịdebere Belleville, Ontario. 6 mechie ụgbọ ala CN na-ebugharị ụgbọ elu na ọwụwa anyanwụ Canada na ọrụ ndị njem na VIA.
Lars Hagberg / AFP site na Getty Images
Douglas Porter, onye isi akụ na ụba na BMO Financial Group, kwuru na mgbochi ndị a nwere ike imebi mbibi ogologo oge, mana o siri ike ịkọwapụta ihe kpatara nkwụsị ụgbọ ala.
O kwuru, sị, "Ekwesịrị m iche ma ọ ga-emebi mmebi ngwaahịa Canada na-adịgide adịgide, ọkachasị ma ọ bụrụ na nke a abụghị ihe omume otu ugboro," O kwuru.
Ihe mgbochi ndị dị ugbu a bụ nke ndị chọrọ atụmatụ ịbanye na pipesal Coastal GasLink, nke ga-ejikọ ọnụ na ọdụ ụgbọ mmiri ebupute gas sitere n'okike n'ụsọ oké osimiri British Columbia. Ma ọdụ ụgbọ mmiri na mbupụ na pipeline ahụ adọtala ego mba ofesi, sitere na Royal Dutch Shell na otu ndị na-achụ ego maka ndị isi ụlọ ọrụ US KKR & Co. Inc., na-eduzi.
Oge ndị ọzọ ume, ọkachasị ndị Trans Mountain Pipeline, nke ga-ejikọ pipeline dị ugbu a iji buo mmanụ site na Alberta gaa n'ụsọ osimiri BC, ejirila ngagharị iwe na ịgba akwụkwọ kwụsịlata n'oge gara aga. Nnukwu ndị isi dị ka Don Lindsey, onye isi ụlọ ọrụ Teck Resources Ltd., ekwuola na ọnọdụ nke ụdị ọrụ a ga-emetụta ma ụlọ ọrụ ya etinye ego na ọrụ ọhụrụ na Canada.
Mkpesa emeela na US kwa, gụnyere nke bidoro na 2016 na North Dakota ebe ndị ngagharị iwe ji oche ịnọdụ ala na akwụkwọ iji gbue ụlọ ọrụ Dakota Access Pipeline ọtụtụ ọnwa n'olile anya na a ga-eweghachi ya. N'oge na-adịbeghị anya, e nweela ụdị mbọ ndị a na mpaghara ọwụwa anyanwụ US iji gbochie owuwu nke ọkpọkọ mmanụ.
Ọ bụ netwọọk. Ọ bụrụ na i mechie akụkụ, ị ga-akpọchi ihe niile ”
Onye nkwuchite CN Olivia Quenneville
Mana Jim Bookbinder, prọfesọ na Mahadum Waterloo dị na Ontario nke na-amụ usoro usoro njem, kwuru na ọ dị mkpa icheta na Canada bụ isi nwere naanị usoro ụgbọ okporo ígwè abụọ: otu CN na-arụ, nke ọzọ site na Canadian Pacific Rail Ltd.
Ọ sịrị, "Anyị nwere ụzọ ụgbọ oloko abụọ nke mba niile, mana naanị abụọ." "Na US, a ga-enwe ọkara iri na abụọ ọ ga-esiri gị ike igbochi ha niile."
Onye na-ekwuchitere CN jụrụ ịnye nkọwa, mana kwuru na mgbochi na naanị otu ntụpọ metụtara usoro ahụ dum.
Olivier Quenneville kwuru na ozi email. “Ọ bụrụ na ị kpoo otu akụkụ, ị na-akpọchi ihe niile.”
Bookbinder kwuru na ọtụtụ azụmaahịa, ọbụlagodi ndị na-adabere na sistemụ ụgbọ ala maka ọrụ, nwere ike iguzogide nsogbu nke nkwụsị oge nwa oge na ọrụ n'ihi na ha nwere ike ịnwe oke aka ma ọ bụ nwee ike ịkwagide ịkwụ ụgwọ maka isi mmalite ọhụrụ maka obere oge.
Mmeghari ahụ bụ obere ihe kpatara na ndị na - ahụ maka akụ na ụba ejighị n'aka banyere nnukwu macroeconomic mmetụta nke nkwụsị ugbu a.
Ajụjụ bụ, ogologo oge ole ọ ga-adị? ” Nathan Janzen, onye ọka mmụta akụ na ụba na RBC kwuru.
Ndị uwe ojii na-enye iwu nye ndị na-eme ngagharị iwe n'okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè na St-Lambert, na ndịda Montreal, Que. na Onwa 20.
Janzen kwuru na ọrụ ọrụ CN otu ụbọchị na Nọvemba mere naanị obere mmebi ahụ na ụba. Ọ na-eche na iku a nwere ike belatara akụrụngwa anụ ụlọ Canada na Nọvemba site na erughị otu ụzọ n'ụzọ iri nke isi pasent.
Obere nsonaazụ a bụ n'ihi na okporo ụzọ ụgbọ oloko na-agba ọsọ ọsọ mgbe ngwa ngwa gafere, akụ na ụba buru ibu na-amaliteghachi, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ụfọdụ azụmahịa na-ata ahụhụ karịa n'ihi nsogbu ahụ.
Dịka ọmụmaatụ, Nutrien Ltd nke dabeere na Saskatoon, nke ndị na-egwu ala na Western Canada, kwuru na ọrụ CN na November mere wedata ụgwọ ọrụ ya nke atọ site na $ 10 nde, mana na ọnọdụ dị ugbu a enwewo ntakịrị mmetụta ruo ugbu a.
Relidabere ntụkwasị nke yinye ndị Canada na-aghọzi ihe na-echegbu anyị
Onye isi Nutrien Chuck Magro nye ndị na - ekenye ndị ọzọ
Onye isi Nutrien Chuck Magro gwara ndị na - ekenye ihe n'izu a, "tụkwasịrị anyị obi n'onyinye ndị Canada na - aghọzi ihe na - echegbu anyị."
Na ọdụ ụgbọ mmiri Halifax, Abbott kwuru na "isi ọwụwa" ugbu a nwere ike igbochi ndị ahịa ya iji ya mee ihe n'ọdịnihu, na-ahọrọ kama ịgafe ngwongwo na Baltimore na New York, Piper, onye isi oche nke International Longshoreman's Association of Halifax, na-echegbu ndị ọzọ. ndị ahịa buru ibu, gụnyere ndị njem ụgbọ mmiri French CMA CGM SA ga-agbaso ụzọ ACL. ,Fọdụ, ọ na-atụ ụjọ, wee ghara ịlaghachi.
N'oge a, ụgbọ mmiri ndị ọhụrụ ka na-abata na Halifax, mana Piper kwuru na ọtụtụ anaghị ebupute ibu ngwongwo zuru oke, na o mere atụmatụ na ọrụ agbadalata pasent 50.
A na-ebupute ụfọdụ ibu na gwongworo, ụzọ dị oke ọnụ karị ma dị nwayọ karịa iji buo ibu. Enwekwara ụfọdụ ibu n'ụgbọ mmiri na-ebu, ma ọ nweghị ike ịga ebe dị anya n'ọdụ ụgbọ mmiri ahụ, Piper kwuru.
Otutu ugbo ala n'ọdụ ụgbọ mmiri dị nso ebe a ka onye ọ bụla na-enwe olileanya maka mkpebi ga-enyere ụgbọ okporo ígwè aka ịmaliteghachi.
Mbelata nke ọdụ ụgbọ mmiri a na Halifax na-abịa n'oge dị njọ: ọdụ ụgbọ mmiri ahụ gosipụtara uto okpukpu abụọ na okporo ụzọ ma gbakwunye narị narị ọrụ na afọ ndị na-adịbeghị anya site na ire onwe ya dị ka ụzọ kachasị ngwa ngwa iji kwaga ụgbọ mmiri banye na North America.
"Nnọ niche anyị bụ ngwongwo na-emetụta oge," Piper kwuru. "Ihe a na Halifax bụ, gbasara ala, anyị enwetala ohere karịa ụfọdụ n'ime ọdụ ụgbọ mmiri ndị dị na US, n'ihi na mgbe ihe batara n'ọdụ ụgbọ mmiri anyị, ọ na-ada n'elu ụgbọ ala, ọ na-aga Chicago tupu ụgbọ mmiri enwe ike gaa New York, Baltimore ma ọ bụ ebe ọ bụla. ”
Ndị ọrụ otu etinyela ego ezumike nka - site na ịnakwere iji ego ha iji nyeghachi ego ụgbọ mmiri na-akpọ ebe ahụ - ịbanye n'okporo ụzọ ka ukwuu n'ọdụ ụgbọ mmiri, dị ka Piper si kwuo.
Ọ sịrị, "Ego a nwere ike ịlaghachi na akpa anyị, mana anyị chọpụtara na enwere ahịa ebe a ka anyị nwere ike ịrata ndị ọkwọ ụgbọ mmiri ka ọ gaa Halifax," "Ihe anyị tụfuru site na ụgwọ ezumike nka anyị, anyị na-aba n'okporo ụzọ ụgbọ mmiri."
N'ezie, Halifax abụghị naanị ebe Canada na-ata ahụhụ. Ngagharị iwe na nso Toronto, Montreal, Vancouver na obodo ndị ọzọ akwụsịla okporo ụzọ n'okporo ụzọ dị iche iche, na ọdụ ụgbọ mmiri oge ụfọdụ.
Wet'suwet'en ndị isi ketara eketa rutere Mohawk Community Center na Tyendinaga, Ontario. na Onwa 21. Ndị isi ihe nketa BC kelere ndị Mohawks maka ịkwado ha na-emegide ọrụ ọkpọkọ na mpaghara ala ha site na igbochi ụzọ ụgbọ okporo ígwè dị n'etiti Toronto na Montreal.
Forcedzọ ụgbọ okporo ígwè na Ontario manyere CN mechie ọrụ na Eastern Canada, na-ahapụ onye ọrụ 450 na nwa oge. Via Rail Canada Inc., nke na-eji ụgbọ oloko eme njem n'otu ụzọ, kwuru na ọ na-atọgbọ ndị ọrụ 1,000 ruo mgbe okporo ụzọ ụgbọ oloko ga-emepe emepe ma na-ahụta na ọ dị mma ọzọ.
Otu esi egbochi ebe ọdụ ụgbọ mmiri nwere ike imetụta ọdụ ụgbọ mmiri narị narị ma ọ bụ karịa karịa 1,000 kilomita, na Montreal na Halifax, na-egbochi ọtụtụ ndị ọkachamara n'ihe banyere akụ na ụba na ọbụna ndị ọkachamara n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè, mana ọ bụ ihe doro anya na ndị na-agba ọkpọ na-achọpụta na ha nwere ike ime.
Agbanyeghị na ọtụtụ n'ime ndị ngagharị iwe a na-enwe nchegbu banyere mgbanwe ihu igwe, ngagharị iwe ndị a mere n'oge na-adịbeghị anya nwere ihe mgbagwoju anya n'ihi na ha metụtara ajụjụ gbasara ikike ụmụ amaala ala nna.
Mgbapu mmiri nke Coastal GasLink a choro gafere site na ala Wet'suwet'en ala, nke, dika otutu ndi British Columbia, nke mbu bu nke ndi mbu nke United States nyefere ya n'aka Gọọmentị Canada. N'ime obodo Wet'suwet'en, enwere ngalaba dị iche iche na-emegide ma na-akwado ọrụ ahụ, enwere ajụjụ ndị a na-edozighi gbasara onye ga-ekwuchitere ndị nke First Nations.
Drew Fagan, onye prọfesọ na Mahadum nke Munk School of Global Affairs na Ọha na Ọha na Mahadum Toronto, kwuru na ọtụtụ nsogbu a - ngagharị iwe a na BC metụtara mkpesa akụkọ ihe mere eme nke ndị amaala obodo na mgbanwe ihu igwe - na-eme ka ọ bụrụ ihe ọ ga-achọsi ike karị.
Ọ sịrị, "Nke a bụ ihe anyị kpọrọ nsogbu jọgburu onwe ya." "Anyị na-ekwu maka nsogbu ndị dị ka ịgba ọsọ, ọ naghị adị mfe ịgụta ọnụ, esemokwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị, nwere nsogbu ndị ọzọ, enweghị ezigbo ihe kpatara ya na enweghị ngwọta doro anya dị ka ajọ omume na nke a bụ ajọ ihe kachasị njọ."
===> Enwekwu ederede na CANADA ebe a <===
Isiokwu a pụtara na mbụ https://business.financialpost.com/news/economy/choke-point-how-the-blockade-movement-has-sent-tremors-across-canadas-economy-and-beyond
Richard Grenell na-amalite ịnabata ọrụ ụlọ ọrụ ọgụgụ isi ya, na-eme ka ụjọ na-atụ nke ibe - New York Times
Lyon jikere merie Juventus na mmeri 2-0 na Metz
Switzerland: marmụ nwanyị ga-aga na Switzerland na ụwa niile n'agbanyeghị Covid-19
India: Iltija Mufti kwuru na gọọmentị na-atụ ụmụ nwanyị ụjọ jụọ ya…
Morocco: Morocco: ọnwụ dị mwute nke onye njem nlegharị anya na France